चरमोत्कर्षलाई - अचानक एक महिला अधीन गर्न सक्ने सबैभन्दा खराब कष्ट को एक। र यो घृणित लक्षण सँगसँगै छ। महिला अत्यधिक डराएको, अवसाद, मुड हानि, फिक्री र थप पीडित। संग रजोनिवृत्ति केही महिला तुरुन्तै स्त्रीरोग विशेषज्ञ बारी देखिन्छ। निस्सन्देह, यो अन्य माध्यम भन्दा बढी विश्वसनीय जस्तो देखिन्छ। तर वैकल्पिक चिकित्सा यसको लोकप्रियता गुमाउनु छैन। यस लेखमा हामी कुन लोकप्रिय मिडिया, केन्द्रित हुनेछ रातो क्लोभर। औषधीय गुण यो बोट को चरमोत्कर्षलाई समयमा डाक्टर सल्लाह दिन्छन् गर्न सक्ने महंगा औषधी भन्दा कुनै खराब छ।
रजोनिवृत्ति के हो?
चरमोत्कर्षलाई फरक रजोनिवृत्ति भनिन्छ। यो सामान्यतया 45 वर्ष सुरु गर्ने एक महिलाको जीवन मा एक विशेष अवधि हो। शरीर हर्मोन परिवर्तन र फेरबदल गर्न थाल्छ। स्वाभाविक, यो समग्र स्वास्थ्य र मुड मा नकारात्मक प्रभाव, साथै सबै प्रणाली र अङ्गहरूको सञ्चालन भएको छ। यो समयमा, महिला बिस्तारै छोराछोरी जन्माउन सक्ने क्षमता हराउछ। केही महिला धेरै असुविधा र असुविधाको महसुस बिना चुपचाप रजोनिवृत्ति ग्रस्त छ। अरूलाई incessant ebb सहन बाध्य छन्। हामीलाई यी नकारात्मक घटना प्रकृति जाँचौं।
यो एस्ट्रोजेन - यो महिला सेक्स हर्मोन कि ज्ञात छ। तिनीहरूले hypothalamus र thermoregulation कार्य। रजोनिवृत्ति लैंगिक समारोह को शुरू संग रगत एस्ट्रोजनको स्तर घट्छ बस किनभने गायब। शरीर यसलाई आदर्श वा रोग बाट विचलन रूपमा मानते। त्यहाँ एक महिला एक ज्वरो छ, तातो चमक छन्। एक सानो पछि यसलाई बित्दै। तर सबै रजोनिवृत्ति लक्षण चाँडै गायब। गर्म चमक अन्तिम औसत 15 मिनेट मा आतंक आक्रमण उत्पन्न वा अस्थमा सक्छ।
सबै रोगहरु संग, रजोनिवृत्ति केही लक्षण सँगसँगै छ। यहाँ सबै भन्दा साधारण हुन्छन्:
Psycho-भावनात्मक सिंड्रोम। महिला निराशा अनुभव गर्न, आतंक सुरु हुन्छ। त्यो whining, बन स्नायु, संवेदनशील। त्यहाँ बुढ्यौली को डर छ, मान्छे र पनि आफु गर्न चासो हराउछ।
खराब सपना। को climatic अवधि सामेल गर्ने लगभग सबै महिला, साथै रात, एक लामो र डरलाग्दा सपना लागि सुतेको झर्ने सपना अवरोध को को गुनासो।
प्रदर्शन गिरावट। यो खराब प्रतिक्रिया, ढिलो, ध्यान दिएनौं कारण छ।
Endocrine malfunctions र चयापचय विकार। व्यवहार, भोक वा, त्यसको विपरीत खाने परिवर्तन, यो दुगुना छ। प्राप्त वजन, सुनिंनु देखिन्छन्।
Psychosocial परिवर्तन। रजोनिवृत्ति अनुभव महिला, अक्सर फिर्ता लिया हुन। तिनीहरूले सहयोगिहरु र साथीहरूसँग कुराकानी गर्न पनि कम कम्पनी, को भाग हो।
यौन जीवनमा परिवर्तन। विपरीत सेक्स मा रजोनिवृत्ति चासो को शुरू संग बिस्तारै गायब। पनि यौन गतिविधि कम।
रातो क्लोभर (Meadow)
यो एक बारहमासी जंगली बोट छ। यो गुलाबी वा बैजनी फूल र एक सुखद गन्ध छ। रातो क्लोभर - को legume परिवार स्वामित्वको एक बोट। पारंपरिक चिकित्सा मा ज्यादातर लोक निको अभ्यासहरू प्रयोग, शायद प्रयोग गरिन्छ। पाठ्यक्रम मा मात्र फूल हो तर पनि छोड्छ। दुवै सुकेको र त्यसपछि छाप। फूल पनि सलाद थपियो वा जाम बनाउन सकिन्छ। सुकाउने धेरै छोटो समय हुनुपर्छ। एक बिरूवा सबै लाभ बित्तिकै यसलाई गाढा हुन्छ रूपमा हराएको छ।
रातो क्लोभर र यसको संरचना को प्रयोग
अब सीधा रातो क्लोभर र रजोनिवृत्ति यो बोट को औषधीय गुण विचार गर्नुहोस्। खैर, यो लाभदायक तत्व मा धनी छ। तिनीहरूले भिटामिन बी, सी, ई, K. भएको बोट पनि फलाम, मैंगनीज, जस्ता र क्रोमियम को धेरै समावेश समावेश गर्नुहोस्। यो coumarone छ र salicylic एसिड, अस्थिर तेल।
शरीरमा रजोनिवृत्ति प्रभाव समयमा रातो क्लोभर सकारात्मक छ। यो हृदय, हड्डी बलियो बनाउँछ रक्त कोलेस्ट्रल को स्तर lowers। साथै, यो बोट क्यान्सर को खतरा, कम श्वसन समारोह सुधार गर्छ। क्लोभर रजोनिवृत्ति मा मात्र होइन मद्दत गर्छ। यसलाई यौन गतिविधि र इच्छा बढ्दै लागि, भारी मासिक धर्म, महिला लैंगिक अङ्गहरूको सुनिंनु कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। रजोनिवृत्ति र flushes रातो क्लोभर को प्रयोग, निद्रामा सुधार normalizes शरीर तापमान। साथै, यो थैली को कामकाज stabilizes र उपस्थिति सुधार गर्छ। रजोनिवृत्ति रातो क्लोभर औषधीय गुण सम्भव देखाउँछ। यसलाई आफ्नो psycho-भावनात्मक राज्य, र हर्मोन normalizing, महिला को अवस्था सुधार गर्छ। त्यसैले, हामी यस उपकरण सही कसरी प्रयोग गर्ने देखो।
कसरी रजोनिवृत्ति रातो क्लोभर प्रयोग गर्ने?
menopausal लक्षण को एक वैकल्पिक उपचार क्लोभर छ। जब रजोनिवृत्ति उपचार, औषधीको को तयारी समय र प्रयास को धेरै लिन छैन। एक उपकरण तपाईं एक राम्रो भावना दिनेछु।
क्लोभर को tincture तैयार, सुकेको फूल लिन, यो कटौती गर्न मनमोहक र तीन चम्मच को वेल्डिंग को लागि एक कन्टेनर राख्नु हो। पानी उम्लिरहेको पोख्नुहोस् र बारेमा एक घण्टा Infuse लागि छोड्नुहोस्। भोजन अघि एक दिन तीन पटक लिनुपर्छ। यो tincture टाउको दुखाइ को रूप मा गर्म चमक र रोगबाट समाप्त।
को नसाहरू शान्त र निद्रामा सुधार गर्न, तपाईं क्लोभर निम्नानुसार बनाउँने गर्न सक्नुहुन्छ। लिन सुकेको क्लोभर पात, स्ट्रबेरी, नीबू र raspberries को बराबर भागहरु र पानी उम्लिरहेको खन्याउन। चिया र राति सट्टा एक पेय पिउन। र तपाईं सबै दिन राम्रो महसुस गर्नेछौं। तपाईं रजोनिवृत्ति रातो क्लोभर को निकाल्ने खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। औषधि पसल मा यसको मूल्य धेरै व्यावहारिक छ: 560 rubles। यो पानी संग पतला पिउन आवश्यक छ। बिक्री मा त्यहाँ जो sodezhitsya बोट मा दाना छन्। बारेमा 360 rubles - 100 ट्याब्लेटको को लागत।
धेरै उपयोगी रातो क्लोभर। विशेष रजोनिवृत्ति मा औषधीय गुण, कुनै पनि विशेष जोखिम खडा छैन। एक औसत अधिकतम स्वास्थ्य संग एक व्यक्ति गर्दा अत्यधिक प्रयोग एक एलर्जी प्रतिक्रिया अनुभव हुन सक्छ। तथापि, contraindications अझै पनि त्यहाँ। तपाईं निम्न रोगबाट लागि चिकित्सकको परामर्श बिना क्लोभर प्रयोग गर्न सक्दैन:
को genitourinary सिस्टम को क्यान्सर;
एक हृदय अवस्था;
जठरांत्रिय समस्याहरू पखाला;
असामान्य रगत clotting;
फुलेको नसाहरु, शिरापरक घनास्त्रता।
साथै, तपाईँले गर्भावस्था र स्तनपान शिशु समयमा क्लोभर पिउन सक्दैन।
तपाईं माथिको को कुनै पनि छैन भने तपाईँले सुरक्षित यी वैकल्पिक माध्यम व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि त्यहाँ साइड इफेक्ट र खस्कँदो स्वास्थ्य हो, tincture प्रयोग रोकियो गर्नुपर्छ। यस मामला मा, चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् सुनिश्चित। प्रायजसो, रजोनिवृत्ति मा धेरै महिलाहरु एक बिरूवा मद्दत गर्छ। कुशल रातो क्लोभर रजोनिवृत्ति मा गुण निको भएको छ। समीक्षा सुविधा इच्छित परिणाम ल्याउँछ भनेर भन्न। यो राम्रो आफ्ना भावनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ, अनिद्रा समाप्त। अवसाद, गायब महिला जीवन फेरि रमाइलो गर्न थाल्छ। एकै समयमा उनको शरीर मा हर्मोन स्तर स्थिर - महिलाहरु बस बढी सन्तुलित र शान्त ढल्छ हुनेछ, यो महसुस।
अन्य वैकल्पिक माध्यम
त्यहाँ अन्य वैकल्पिक दबाइहरु रातो क्लोभर भन्दा कम उपयोगी छैनन् हुन्। औषधीय गुण र आवेदन यी बिरुवाहरु को चरमोत्कर्षलाई मा सुख हुनेछ रजोनिवृत्ति को लक्षण। तिनीहरूलाई हुन्:
डिल। यो तातो चमक को आवृत्ति कम र सुनिंनु समाप्त। डिल पानी सल्लाह पनि colic भोगिरहेका बच्चाहरु दिन।
को pion को Tincture। यो फार्मेसी मा खरिद गर्न सकिन्छ।
ऋषि। शोरबा कक्षहरू rejuvenates, तपाईं विषाक्तता को डर बिना धेरै तपाईं चाहनुहुन्छ रूपमा पिउन सक्नुहुन्छ।
चुकंदर रस। यो अत्यधिक डराएको लागि पिउन सिफारिस गरिएको छ। सुरुमा, पानी संग पतला र त्यसपछि बिस्तारै एकाग्रचित्त तरल उत्प्रेरित।
रजोनिवृत्ति र uterine लागि उपाय
तपाईंलाई आवश्यक: एक नागफनी, एक आमा-र-सौतेनी आमा, स्टेटजोन्स wort, सिमसार calamus (मूल), Motherwort, elecampane, horsetail को rhizome, नितम्ब उठ्नुभयो। सबै सामाग्री मिश्रण, पानी उम्लिरहेको संग कवर। अर्को, यो शोरबा पानी स्नान वा सानो pokipyatit मा तयार हुनुपर्छ। जडीबुटी को मिश्रण पाँच मिनेट जोश छ। त्यसपछि यसको नाली निम्नानुसार। यो भोजन अघि बनाउँने र एक दिन तीन पटक गरौं। जब uterine myoma, यो decoction अलग्गै, यो जंगली स्ट्रबेरी वा चिया यसको पात संग को एक जलसेक लिन सिफारिस गरिएको छ। तीन महिनाको लागि हरेक दिन: पी क्रमबद्घ हुनुपर्छ।
डिम्बाशय apoplexy: कारण, लक्षण र उपचार
बगैचा मा जाडो आश्रय chrysanthemums लागि जाँदा?
तौलिया हार्ड मिसिन मा लुगा धुने पछि किन? लुगा धुने सुझाव
डेनिम सूट - मौसम को फैशन प्रवृत्ति
जनावर देखि मानिसको मूल प्रमाण। मानिसको मूल को नयाँ सिद्धान्त
धमिलो सुइट होटल (टर्की): फोटो र समीक्षा